Uyilwa njani iNcwadana yeNtengiso: Uyilo kunye neMiba eBanzi | Abadali be-Intanethi
Xa sidala isazisi senkampani ye-brand, kuyimfuneko ukuba sithathele ingqalelo izigaba ezininzi ukwenzela ukuba uphawu lube nesiphumo esihle ekuthengiseni nasekuyilweni kwayo iyonke. Esinye sezi zigaba ngokungathandabuzekiyo sisigaba sentengiso.
Ukudala incwadana okanye ipowusta yentengiso yinxalenye yokukhuthaza kunye nokuthengiswa kwebrendi, kwaye nangona abaninzi beyijongela phantsi kuba yinto enye kwinkqubo, eneneni, yi-50% yendawo yenkampani kwimarike. Yiyo loo nto kule post, sifuna ukukwazisa malunga neencwadana zentengiso kwaye siza kukubonisa ezinye tips okanye iingcebiso ukuze i-brand yakho ibe nokuqatshelwa kunye nexabiso elilifaneleyo.
1 Incwadana yentengiso
1.2 iintlobo zeencwadana
1.2.1 Amashiti, iiflaya okanye iiflaya
2 Indlela yokuyila incwadana
2.1 Chaza abantu ekujoliswe kubo kwincwadana yakho
2.2 Ngaphambili: Yila isilogeni esilungileyo okanye imiyalezo ethe ngqo
2.3 Isiphelo sangaphambili: Yila umxholo owakhiweyo, ekulula ukuwuqonda
2.4 Ngaphambili: Sebenzisa iiheda kunye neenkcazelo
2.5 Ngasemva: Sebenzisa iinkcukacha ezongezelelweyo
2.6 Umva: sebenzisa imifanekiso enomtsalane okanye imizobo
Incwadana okanye incwadana yentengiso sinokuthi luhlobo lwamaphepha ashicilelweyo kunye nesicatshulwa kunye nemifanekiso efakiweyo nayo ishicilelwe kumaphepha. Le ncwadana iyilwe njengesixhobo sokubhengeza, eyenza ibe nomtsalane ngakumbi ukuba sisixhobo esikhuthazayo ngaphandle kweintanethi.
Ekubeni zisisixhobo somzimba, zadalelwa ukuba zihanjiswe ngesandla nakwelona nani likhulu linokubakho labantu. Yonke imihla kukho iinkampani ezininzi ezisebenzisa olu hlobo lobutyebi, kuba sifumana kwiibhari, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iindawo zokuzilolonga, iithiyetha, njl.
Kodwa asiyiyo yonke into emalunga nala macandelo, kuba icandelo lezokhenketho nalo liyadlala kolu hlobo lwesiphakathi. Abaninzi bayisebenzisela ukukhuthaza isixeko kunye nezona ndawo zokhenketho kwaye ngale ndlela ukulawula ukutsala abakhenkethi kulo lonke ihlabathi.
Kukho iintlobo ezininzi zeencwadana (siya kuchaza ngokufutshane ngezantsi ukuba zeziphi izimbo eziphambili ezikhoyo ngoku), kodwa eyona ixhaphakileyo idla ngokuba yimilo yoxande ekhangeleka ngathi yenziwe ngamacala amabini. Kwakhona sifumana into esiyaziyo i-triptychs okanye i-diptychs.
Ngokuqhelekileyo zihamba kunye nesicatshulwa kunye nemifanekiso elawula ukutsala umdla woluntu. Ukongeza, uninzi lwazo lukwasebenzisa izixhobo ezikwi-Intanethi ezinjengokupha yazi iakhawunti yakho ye-Instagram okanye kaFacebook ukuze ngale ndlela umsebenzisi okanye umbukeli abe nesandla sokuqala kulo lonke ulwazi olunokwenzeka malunga nenkampani kunye nemveliso.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemidiya, nganye kuzo ibonisa ulwazi ofuna ukuba abanye balubone, ngendlela eyahlukileyo. siyaqala
Amashiti, iiflaya okanye iiflaya
Zezona zisisiseko kunye nolona hlobo luphantsi lwencwadana yeshishini. Ihlala isetyenziselwa amaphulo olwazi amakhulu, kugxininise olona lwazi lusisiseko kwindawo encinci. Ziquka iphepha elinye elivuliweyo elinokuprintwa kwicala elinye okanye omabini. Ngokuqhelekileyo zixande, nangona zinokuba zikwere. Ubukhulu bawo buphakathi A6, A5, 10 x 21cm kwaye kuninzi A4nangona ingaxhaphakanga kakhulu.
IiDiptychs ziincwadana zentengiso ezisongelwe kumacala amabini alinganayo. Ewonke amaphepha ama-4. Owona mlinganiselo usetyenziswayo wamaphecana yi-DinA4, eziyi 21 x 29,7cm. Xa ivaliwe, iya kwenza imizimba emibini okanye iiblades ze-14,85 x 21cm nganye. Njengoko kukho iiblade ezimbini kuphela ezine-fold central, ubuso bangaphakathi buya kuhlala buvulekile ngexesha elifanayo, ngoko kufuneka kubekho ukuqhubeka kunye nokuvisisana phakathi kwabo.
Ii-triptychs ziincwadana zentengiso ezinemigobe emibini, ngoko ke benza amacala amathathu alinganayo ngalinye. Bebonke benza amaphepha ama-6, ama-3 ngaphakathi namathathu ngaphandle. Njengee-diptychs, zihlala zinesayizi ye-DinA4. Ke ngoko xa zivaliwe, imizimba yazo emithathu iya kwenza i-9,9 x 21cm inye.
I-Quadriptychs ziincwadana zentengiso ezisongelwe kumacala amane alinganayo. Ewonke amaphepha asi-8. Ngokufumana indawo ebanzi yee-blades ezi-4, zivumela ukuba zinike ulwazi olupheleleyo, ngendlela ehlelekile neqondakalayo. Kukho iisayizi ezininzi zolu hlobo lweencwadana, ukusuka DinA4 ukuya DinA7, ukuba DinA4 eyona iqhelekileyo. I-Quadriptychs nayo inokwenziwa kwifomathi yesikwere, esetyenziswa ngokubanzi kukhenketho kunye necandelo le-gastronomic.
Iipolyptychs ziincwadana zentengiso ezinobuso obungaphezulu kwezine okanye imizimba. Ziqulethe indawo eninzi yokuxelela iinkcukacha, ngoko ke zifana nekhathalogu, apho unokunikela khona iintlobo ngeentlobo zeemveliso okanye iinkonzo. Ukuba sisebenzisa olu hlobo, kubaluleke kakhulu ukuba ulwazi luqulunqwe ngendlela enengqiqo kunye nengqiqo, ukwenzela ukuba umfundi afumane kulula kwaye ekhululekile ukuyilandela.
Indlela yokuyila incwadana
Ukwazi indlela yokuyila incwadana yentengiso, sikubonisa izinto eziphambili omele uzithathele ingqalelo ngexesha lenkqubo yokudala, kungekhona nje kuphela incwadana kodwa kunye ne-brand, ngale ndlela uya kukwazi ukuba luhlobo luni lwencwadana oyifunayo kwaye uyidinga njani.
Chaza abantu ekujoliswe kubo kwincwadana yakho
Umthombo: Umxholo weRock
Kubalulekile ukuba kudala ngaphambi kokuba wazi ukuba ufuna ibukeke njani incwadana yakho, uqonde kwaye wazi Ngubani omawunxibelelane naye kwaye unxibelelane neyiphi ithowuni. Ekubeni incwadana enemifanekiso ayiyi kufana nomntu omncinci okumgangatho wentlalo-nkcubeko unokuba phakathi, kunomntu omdala onezinga eliphezulu kakhulu.
Yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukuba uhlukanise incwadana yakho ngokweminyaka, umvuzo, ijografi, inqanaba lentlalontle, inqanaba lentlalontle, njl. Kulapho iingongoma eziphambili zabaphulaphuli ekujoliswe kuzo zingena khona, zichaze joliswe kuyo kwaye xa sele unayo, uyakuqala ukubumba incwadana yakho ngendlela ezenzekelayo.
Ngaphambili: Yila isilogeni esilungileyo okanye imiyalezo ethe ngqo
Umfanekiso omhle obethelela incwadana enemifanekiso ubaluleke njengombhalo olungileyo ochaza kwaye ushwankathele yonke incwadana kunye nento ofuna ukuyidlulisela. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba ubhale kwiphepha lokuqala lale ncwadana uhlobo lwesilogeni okanye umyalezo omfutshane kunye nokufutshane okwaziyo ukutsala abaphulaphuli bakho, oko kukuthi, kufuneka uqonde into ofanele uyibeke ngaphambili, embindini nangasemva kwincwadana.
Umzekelo, isilogeni asanelanga, kuba iqweqwe kufuneka lifake umyalezo othe ngqo okanye ocacileyo ukuze utsale umdla womfundi. Ungabandakanya imibuzo ukuze bakwazi ukwenza uhlobo lobuqhophololo.
Ukuba uyayikhuthaza imveliso, kufuneka vumela imveliso ithethe ngokwayo, Ukuba incwadana yakho ilulwazi oluqokelelweyo lweshishini lakho elinikezelayo, beka uphawu lwakho ngaphambili kunye neziko kwaye wongeze ithegi. Ukuba incwadana yakho isishwankathelo esinolwazi malunga neshishini lakho elinikezelayo, beka uphawu lwakho ngaphambili kunye neziko.
Isiphelo sangaphambili: Yila umxholo owakhiweyo, ekulula ukuwuqonda
Ukucinga ukuba uphumelele ekufumaneni ingqalelo yabafundi bakho, lixesha lokubanika eyona nto bayifunayo, ulwazi malunga neemveliso okanye iinkonzo zakho.
Ukwenza oku, kungcono ukubhala isicatshulwa esingena kakuhle kumacandelo amathathu, kwincwadana ephindwe kathathu, ngalinye linesihloko salo kunye nengcaciso emfutshane.
Ngaphambili: Sebenzisa iiheda kunye neenkcazelo
Izihloko zakho kufuneka zichaze ngokucacileyo nangokufutshane unikezelo lweshishini ngalinye okanye uphawu lwemveliso, ukuze abafundi babone into oyinyusayo ngokukrwaquza.
Kubalulekile ukuba izihloko zigqithise intsingiselo ngokuzimeleyo ngaphandle kwengcaciso engaphezulu. Zama ukunqanda amagama amisayo afana no-“intro” okanye “malunga”, ngokukhetha izichazi ezicacileyo. Ngaphantsi kwesihloko ngasinye, unako chaza imveliso okanye inkonzo ngokubanzi.
Gcina ezi nkcazo zimfutshane kwaye zithe ngqo kangangoko kunokwenzeka. Zama ukunika abafundi bakho ulwazi olwaneleyo lokubagcina benomdla, kwaye ubavumele basebenzise incwadana yakho njengesiqalo ukuya kwivenkile yakho okanye iwebhusayithi.
Ngasemva: Sebenzisa iinkcukacha ezongezelelweyo
Emva kokuba uchaze izinto ozinikezelayo, qiniseka ukuba ubandakanya nantoni na umthengi wakho ayakufuna ukuthatha inyathelo, nokuba idilesi ye-imeyile ukuqhagamshelana nawe, idilesi yeshishini lakho, okanye ikhonkco kwiwebhusayithi yakho.
Umbhalo wesibini ungaya ekugqibeleni ukuba ubukholisa, ngoko ungathembela kumfundi wakho etyhila iphepha ukuze azifumanele olu lwazi ngokwakhe. Yinkqubo eqhelekileyo ukubeka ulwazi olubalulekileyo loqhagamshelwano phakathi.
Umva: sebenzisa imifanekiso enomtsalane okanye imizobo
Ukuze incwadana yakho ingabi nanto kwaphela kwaye inombhalo omninzi, kufuneka ibe njalo ilayishwe kwakhona ngemifanekiso kunye nemifanekiso ukuba ngandlel' ithile ibenakho ukuququzelela ukufikelela nokutsala umdla woluntu.
Umfanekiso, i-ayikhoni okanye umzobo wonikezelo lwemveliso nganye.
Umfanekiso ofakiweyo, i-ayikhoni, okanye umzobo wephepha lakho lesihloko (ukhetho)
Eminye imifanekiso eyongezelelweyo, ii-iyikhoni okanye imizobo yecandelo lakho elithi "Uqhagamshelwano" kunye "Malunga".
Ngamafutshane, sinethemba lokuba ezi ngcebiso okanye isikhokelo esincinci sikuncede ukuba uqalise ukuyila incwadana yakho yentengiso. Kubalulekile ukuba uyazi ukuba lo ngumzekelo nje, ungawuyila ngendlela efanelekileyo ibhrendi kunye neemfuno zakho. Ungasebenzisa ezinye iintlobo ezahlukeneyo esikubonise zona ukuba awufumani sisombululo nale usebenza nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyila njani incwadana yentengiso